Caddayn: Khariidadaha Kulaylka ee Bilaashka ah iyo Duubabka Kulanka ee Hagaajinta Mareegta | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 30, 2021 Khamiista, Diseembar 30, 2021 Douglas Karr
Sidaan u qaabeynay oo aan u horumarinay mawduuc Shopify gaar ah dukaanka dharka online, Waxaan rabnay inaan hubinno inaan naqshadeynay goob ecommerce ah oo qurux badan oo fudud oo aan jahwareerin ama aan ka badin macaamiishooda. Mid ka mid ah tusaalaha tijaabada naqshadeena wuxuu ahaa a macluumaad intaas ka badan block kaas oo lahaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan alaabta. Haddii aan daabacno qaybta gobolka caadiga ah, waxay si weyn hoos ugu dhigi doontaa qiimaha waxayna ku dari doontaa badhanka gaariga. Si kastaba ha ahaatee, haddii aan daabacno xogta hoose, booqde waxaa laga yaabaa inuu wayo in ay jiraan faahfaahin dheeraad ah.
Waxaan go'aansanay inaan samayno qayb beddelaad ah oo si habboon loo magacaabay Macluumaad dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, markii aan ku daabacnay goobta, waxaan isla markiiba ogaanay in booqdayaashu aysan gujin qaybta si ay u ballaariyaan. Hagaajintu waxa ay ahayd mid khiyaano leh… tilmaame yar oo ku xiga ciwaanka qaybta. Markii la hirgaliyay, waxaanu daawanay khariidadaha kulaylka oo aanu aragnay in tiro aad u badan oo booqdayaal ah ay hadda la falgaleen toggle.
Haddaanan duubin kulanno oo aan soo saarnay khariidado kulaylka, ma awoodno inaan tilmaamno arrinta ama aan tijaabino xalka. Khariidadda kuleylku waa lama huraan marka aad horumarinayso nooc kasta oo degel ah, goobta ecommerce, ama codsi. Taasi waxay tidhi, xalalka kulaylka waxay heli karaan qaali. Badankoodu waxay ku saleysan yihiin tirada booqdayaasha ama fadhiyada aad rabto inaad la socoto ama duubto.
Waad ku mahadsan tahay, weynaanta warshadeena waxay leedahay xal bilaash ah oo la heli karo. Caddaynta Microsoft. Keliya geli koodka raadraaca caddaynta ee goobtaada ama goobtaada Maareynta Tag oo waxaad ku socotaa oo aad ku socotaa saacado gudahood markii fadhiyada la qabtay. Xitaa si ka sii fiican, Caddaani waxay leedahay is dhexgalka Google Analytics… gelinta isku xidhka ku habboon dib-u-ciyaarista Google Analytics dashboardkaaga! Caddayntu waxay abuurtaa cabbir caadadii loo yaqaan Dib-u-Celinta Cad URL oo leh qayb-hoosaadyo aragtiyo bog ah. Qoraal dhinaca kale ah… wakhtigan, waxa kaliya oo aad ku dari kartaa hal hanti shabakad si aad ula mid noqoto Cadaynta.
Microsoft Clarity waxay bixisaa sifooyinka soo socda…
Khariidadaha kulaylka degdega ah
U samee khariidadaha kulaylka si toos ah dhammaan boggagaaga. Eeg halka ay dadku gujiyaan, waxay iska indhatiraan, iyo inta ay u guurayaan.
Daawo sida ay dadku u isticmaalaan goobtaada duubista fadhiga Sahami waxa shaqaynaya, baro waxa loo baahan yahay in la hagaajiyo, oo tijaabi fikrado cusub.
Aragtida iyo Qaybaha
Si degdeg ah u soo ogow halka isticmaalayaashu ay ka niyad jabaan oo u beddel dhibaatooyinkan fursado.
Caddayntu waa GDPR iyo CCPA diyaar, ma isticmaasho muunad, oo waxay ku dhisan tahay il furan. Waxa ugu wanagsan waxaad ku raaxaysan doontaa dhamaan sifooyinka Clarity oo qiimahiisu yahay eber. Waligaa ma geli doontid xadka taraafikada ama laguma qasbi doono inaad u cusboonaysiiso nooca lacagta ah… weligeed waa bilaash!
Isdiiwaangeli si aad u caddeyso Microsoft
Tags: Hufnaanhagaajinta ecommercecaddaynta Microsoftduubista fadhigahagaajinta goobtaimtixaankadejinta shabakadda